यदि प्रचण्डले आत्म’समर्पण गरेमा नेकपा जोगिन्छ , नत्र भने प्रधानमन्त्री ओलिले पार्टी फुटा’उनेछन – मातृका यादव – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौ :सत्तारुढ नेकपाभित्रको वि’वाद ग’म्भीर मोडमा पुगेको छ।असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजी’नामा माग भएपछि सुरु भएको वि’वाद समा’धान गर्न भएका सबै प्रयास असफल हुँदै आएका छन्।
साउन ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मंसिरमा अ’र्ली महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ओलीले राखेका थिए। त्यसमा प्रचण्डले पनि सहमति जनाएका थिए। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भ’ण्डारीलाई साक्षी राखेर सहमतिमा हस्ता’क्षर गर्ने त!
Previous कुलमान घिसिङ्ग को कार्यकाल भदौमा सकिदै पुन नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने ले मात्र सेयर गर्नुहोस्!
Next को’रोनाको बहानामा काम ठग्दै सिंहदबारका कर्मचारी, हप्ताको एक दिन काम गरेर पूरा तलब लिने माग…हेर्नुहोस् ।